Tag Archives: famba
Mawiricheya anovakwa netekinoroji yepamusoro inogoneka kubatsira kubatsira kufambisa hupenyu hwevanhu vasina kugona kufamba. Nekuda kwenzvimbo yepamusoro yetekinoroji, zviwanikwa, uye mitengo yemitengo yekuvaka yakamisirwa kumusoro kupfuura mawiricheya emawoko. Vanhu vazhinji havanzwisise mafambiro ekuti wiricheya inovakwa sei uye kuti chii kuyedzwa […]
Zvinodiwa nemunhu pakati pebhuku remanheru kana remawiricheya zvinowanzoenderana nemamiriro emunhu uye zvemari. Ose ari maviri ane zvayakanakira nezvayakaipira, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu emunhu uye zvigadzirwa zvigadzirwa. Ndiwo mumwe wemibvunzo inonyanya kubvunzwa pakusarudza wiricheya. Pakupera kwezuva, vanhu vanoda […]
Posted on September 19, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Kwenguva yakati rebei vanodiwa vanofamba-famba vanga vasingatariswe semawiricheya evana kusvika zvino. Ivo vanoonekwa sevana chemawiricheya nekuti ivo vanopa rutsigiro izvo vatyairi vekutengesa vasingakwanise. Vanotyaira vanosiyana nemagariro evana vemawiricheya munzira yavanodonha uye nemhando yerutsigiro yavanopa, uye nenzira yavanogadzirisa kukura. Izvi […]
Posted on September 18, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Vanhu vane mawiricheya vanokwanisa kutyaira mota nekugadzirisa zvakasiyana mumotokari yavo, kana ivo vanotyaira mota dzakagadzirirwa vashandisi vemawiricheya. Kune mawoko ekudzora uye akasarudzika mota dzinovatendera kutyaira vachishandisa joystick zvakanyanya. Kuvimba nerubatsiro kunogona kutyisa kana zvasvika pakutyaira mota nekuti yakadaro […]
Mhando dzePediatric Wiricheya
Posted on September 17, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Kune mhando dzakasiyana dzevana vemawiricheya anosanganisira madiki mawiricheya evana, zvigaro zvinokura zvevana nemajuniya, asingaremi kana emitambo mawiricheya, akajairika mawiricheya, maspecialty chair, emagetsi evana mawiricheya, uye vanofamba. Pachechi mawiricheya anowanzo gadziridzwa muhukuru uye mavara. Vabereki havangakwanise chete kuwana chigaro chakanakira mwana wavo, asi chinopa vana […]
Kuwana Wiricheya kuAirport
Kuwana chigaro kunhandare yendege kuri nyore kwazvo asi hazvivimbiswe kuti zviwanikwe panguva chaiyo yekuda kwechikumbiro cheminiti yekupedzisira. Kuti uone kuti wiricheya inowanika panguva yekushaiwa, munhu anofanirwa kubata nendege kuti vagone kuronga chikumbiro chako chezuva rako […]
Posted on September 15, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Mawiricheya emagetsi haadi peturu sezvo asingamhanye pane gasi inofambisa mota. Mawiricheya emagetsi anofambiswa nemagetsi mota ine bhatiri recharge. Mazhinji mawiricheya emagetsi anouya nechaja yakakosha kudzoreredza bhatiri iro rinowanzotora kubva kumaawa 8-10 kusvika kuzere zvizere. Nguva yehupenyu hwebhatiri […]
Paunenge uchitsvaga maronda ewawiricheya, unogona kuona kuti pane akasiyana akasiyana mabrandi akadai saKarman, Invacare, Dhiraivha Medical, uye Medline. Asi ndeipi iri rakanyanya kunaka wheelchair brand muAmerica? Izvo zvese zvinoenderana nemubatanidzwa wemutengo poindi, huremu hwechigadzirwa uye mashandiro, pamwe nezvako zvaunoda. Vazhinji […]
Posted on September 13, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Paunopedzisira uri muwiricheya, chinhu chekutanga chingangouya mupfungwa ndechekuti unogamuchira sei chiitiko chinoshandura hupenyu muhupenyu hwako. Kudzidza kuti uchafanirwa kushandisa wiricheya pakufamba kwako kwezuva nezuva kungaratidzika sekutyisa kana kunetsa kubata. Pakutanga, hausi mukana uri nyore […]
Mashandiro Anoshanda Mawiricheya Wiricheya
Posted on September 12, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Mazhinji mawiricheya emawoko anoshandiswa semubatsiri wekufamba uye anozvifambisa wega. Mawiricheya emawoko anofambiswa nekushandura mavhiri neruoko kazhinji nekusunda pamazariro akapoterera mavhiri anonzi "push rim." Kune zvakare anobata kumusana kuti igone kusundirwa nemumwe munhu. Paunenge uchishandisa bhuku […]